Nhau - Mhando uye kunyorera kwesimbi mesh
Mhando uye mashandisirwo akawedzerwa esimbi mesh
Iyo yakakwidziridzwa simbi mesh inogona kuganhurirwa mumhando dzakasiyana dzakasiyana maererano nekushandisa kwayo, senge yakakwirira-kukwirisa chikuva chinokambaira, mechiniki inodzivirira mabutiro, makuru emigwagwa, njanji njanji, hwaro gomba materu ekuchengetedza, kushongedzwa kwemukati, siringi siringi, michina kugadzira, kuvaka michini dziviriro, kudira padenga, masvingo Kupaka, zvikamu zvemotokari, mapuratifomu ekushandira emafekitori emotokari fekitori, kuvaka ngarava nekugadzirisa, mapurojekiti ekuvaka, fenzi dzemumunda, matura ekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva.
Dziviriro yemateru yakawedzera simbi mesh: 100-banga rakawedzera simbi mesh, ukobvu hwe ingangoita 1.0-2.0mm, maficha: kurema uremu, yakasimba tensile simba, nyore kuvaka, mutengo wakaderera, basa: inogona kunyatso simbisa kusimba kwedivi rerutivi rwegomba renheyo. , uye chengetedza hwaro hwegomba Kuchengetedzwa kwevashandi vakakomberedza uye vepasi pevhu
(2) Scaffolding yakawedzera simbi pajira riya: 80-banga gobvu rakawedzerwa simbi pajira riya, kureva 4mm yakawedzera simbi pajira riya, maficha: asiri-pitikoti, kupfeka nemishonga, hombe kubereka kugona, yakakwira tensile simba, uye inogona kushandiswa kakawanda. Rinoshanda: Scaffolding yakawedzerwa simbi mesh inogona kunyatso kudzivirira vashandi vepamusoro-kukwira kubva pasingatarisirwe chiitiko chekuchengetedza.
(3) Yakawedzerwa simbi pajira rekuchengetedza: Inotora dhaimani-rakaumbwa rakawedzerwa simbi mesh, iyo tambo yeiyo yakawedzera waya mesh ndeye 50x100mm, iyo ukobvu ndeye 3-4mm, uye pamusoro pePVC yakavharidzirwa kudzivirira ngura uye ngura. Iyo inonziwo PVC yakavharwa yakawedzerwa mesh. Zvimiro: yakasimba kukakavara kuramba, kufefetedza, kupenya kwechiedza, Hazvisi nyore kukwira uye zvine chitarisiko chakanaka. Rinoshanda: Iyo simbi mesh fenzi inogona kushandiswa sefenzi yenzvimbo dzakasiyana siyana kudzivirira kuba uye zvisiri pamutemo zviito.
(4) Round-gomba rakawedzerwa simbi mesh: kushandisa yakapetwa simbi mesh, kuzarura: 5-30mm, gomba kure: 5-20mm, basa: kutenderera-gomba rakapetwa mesh sechivigiro chekudzivirira chemashini michina, inogona kudzivirira maoko evashandi, zvigunwe, zvipfeko, Njodzi dzinokonzerwa nekubatana kwemusoro, tsoka uye zvimwe zvikamu nemidziyo.
(5) 304 simbi isina simbi yakawedzera simbi mesh: Inotora dhaimani-yakaita gomba chimiro, iyo yekumusoro uye ukobvu zvinogona kugadziriswa uye kuburitswa maererano nemushandisi, hunhu: yakanyanya kupisa tembiricha, yakasimba asidi, yakasimba alkali, yakasimba ngura kuramba, basa: inoshandiswa kumidziyo yemidziyo mumakemikari zvinomera uye inorema indasitiri yakasvibisa nzvimbo, mechina dziviriro, Iyo ine simba chigadzirwa maficha senge kusefa kunogona kurebesa hupenyu hwebasa reiyo yakawedzerwa simbi mesh.
(6) Ceiling yakawedzera simbi mesh: 1.0x5.0mm gobvu anti-glare mesh, hunhu: kutapudza kurira, kurema kurema, kwakanaka, kuvaka kuri nyore, hapana kugadzirisa kwezuva nezuva, basa: siringi yakawedzerwa simbi mesh inoshandiswa mumahofisi makuru emusangano, mabhaisikopo, karaoke dzimba, mahotera, chiteshi tikiti dzimba, Platform uye zvimwe zvifambiso.